၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Yuyao Sanxing သည်အိန္ဒိယရှိ MEDICAL Fair Fair အိန္ဒိယသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Yuyao Sanxing သည် Dusseldorf ရှိ MEDICAL 2017 သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများပေးသွင်းသူများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်း၏နံပါတ်တစ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ ဒီပြပွဲမှာသူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ဂျာမန်ဖောက်သည်တွေနဲ့တွေ့ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်၊
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Yuyao Sanxing သည်အိန္ဒိယရှိ MEDICAL Fair Fair အိန္ဒိယသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Yuyao Sanxing သည်အိန္ဒိယရှိ MEDICAL Fair Fair အိန္ဒိယသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အိန္ဒိယ၏ ဦး ဆောင်ကုန်စည်ပြပွဲဖြစ်သည်။ ဒီပွဲတော်မှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်အိန္ဒိယဖောက်သည်တွေနဲ့တွေ့ခွင့်ရပြီးဖောက်သည်အသစ် ၁၁၅ ယောက်ရနိုင်ပါတယ်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်! (ဆိုဖီကိုလက်ခံနေသည် ...
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Yuyao Sanxing သည်ကိုးရီးယားရှိ KIMES ပြပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Yuyao Sanxing သည်ကိုးရီးယားရှိ KIMES ပြပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းပြပွဲဖြစ်သည်။ ဤပြပွဲတွင်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်ကိုရီးယားဖောက်သည်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်ဖောက်သည်သစ် ၉၂ ခုရရှိရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်! (မာရီယာသည်ရုပ်ပုံလွှာတွင်ဖောက်သည်တစ် ဦး ကိုလက်ခံနေသည် ...
ဒါဟာပရိဘောဂနှင့်ရုံးအတွက်အသုံးပြုလူကြိုက်များပါတယ်။ အိပ်ယာအဆုံး၊ ကက်ဘိနက်နဲ့ရုံးစားပွဲလိုပဲ ၎င်း၏နိယာမမှာ Lift Actuator ၏အောက်သို့ဆင်းခြင်းနှင့် TV ၏အောက်သို့ဆင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ adapter နှင့်ကြိုးမဲ့ remote တို့နှင့်အတူတကွအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။
လျှပ်စစ်အိပ်ရာအဝေးထိန်း, မြန်နှုန်းမြင့် Linear Actuator, Micro Linear Actuator, ဆေးရုံကုတင်အဝေးထိန်း, ဆေးရုံအတွက်ကြိုးမဲ့အဝေးထိန်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိပ်ရာအဝေးထိန်း,